Tevera kuratidzwa kweiyo iPhone 7 muActualidad iPhone | IPhone nhau
Tevera kuratidzwa kweiyo iPhone 7 mu iPhone News
Zuva rave kusvika uye makuhwa anozopedzisira aendesa kuchokwadi. Inotevera Gunyana 7, na7 pm (Spanish peninsular nguva) Tim Cook nechikwata chake vanozofumura iyo yakamirira-refu iPhone 7, chigadzirwa chakakosha kwazvo chekambani uye chimwe chezvinhu zvinotarisirwa kwazvo kutangwa kwegore. Ino inguva yekusimbisa kuenderera dhizaini, iyo mbiri kamera uye iwo matsva mavara, kuti uone kana Apple ichazopedzisira yasiya iyo 16GB yekugona sechinhu chakakosha sarudzo, kana kuona kuoneka uye nhau dzeiyo nyowani Apple Watch. Pachave nezviziviso zveMacBook Pros nyowani? Tichava nezvishamiso neApple Pay? Unogona kutevedzera zvese izvi uye zvakawanda zvirarame pane Actualidad iPhone nekuda kwekufukidzwa kwatakagadzirira.
1 Mutevere iye kurarama pane iyo blog
2 Isu tinotanga kuratidzira mwaka mutsva wePodcast
Mutevere iye kurarama pane iyo blog
Pane ino peji rimwe chete, pazasi pemitsara iyi, unogona kuteedzera chiitiko chiripo usinganetseke nezve kudzosera zvakare kana kushandisa chero chimwe chirongwa. Nemashoko uye mhenyu mifananidzo pane iyo ruzivo rwuri kuuya kwatiri kubva kuGraham Civic Auditorium muSan FranciscoIwe unongofanirwa kuvhura peji rino uye rega iro ruzivo ruwedzere otomatiki. Iwe unogona zvakare kunyora ako makomendi uye kutora chikamu nesu, uchipa yako maonero pane zvese zvinoitika pachiitiko. Zvese izvi zvichaitika muhwindo pazasi pemitsara iyi.
Rarama Blogi Keynote yeIOS 10 uye iPhone 7
Kana iwe zvakare uchida kuti isu tikukuzivise iwe kana zvese zvatanga, iwe unongofanirwa kunyorera nekudzvanya pane bhatani mune ino hwindo. Ehezve, pane iyo blog tichashambadzirawo zvinyorwa sezvo Apple ichizivisa ayo ekutanga neruzivo rwese nezve iwo.. Iwe unogona zvakare kutitevera pa Twitter, kuburikidza iyo Actualidad iPhone account.
Isu tinotanga kuratidzira mwaka mutsva wePodcast
Mushure mekunge zvese zvaziviswa, kutanga na23: 30 manheru, tichava nePodcast yedu inorarama mune yedu YouTube channel. Iyo Actualidad iPhone Podcast inovhura mwaka wayo uye inoita saizvozvo pasina chimwezve uye hapana chakaderera pane iine ichangobva kuvhurwa iPhone. Tichaongorora zvese zvakaitika pakuratidzwa kweApple, kuitira kuti timirire mese kuti mufungisise ruzivo rwese rwemasikati mukambani. Kana iwe usingakwanise kutitevera tiri vapenyu, iwe unogona kugara uchizviita zvakanonoka nekuteerera yedu Podcast pa iTunes pese paunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Tevera kuratidzwa kweiyo iPhone 7 mu iPhone News
Ndinoifarira iyi. kubva kuEcuador. Galapagos Chitsuwa. Ndatenda…
Chiitiko hachioneke pa apple tv4 asi pa apple tv3.
Apple mazuva ese zvakanyanya kuipa!
iyo mario ine bhatani rimwe chete inoita kuti ive huru
Kutendeseka, kugehena neiyo iPhone 7. Chikonzero chete chandisiri kuzokwidziridza kana ndichidaro, imhaka yehupenzi hwekubvisa 3.5mm chiteshi. Iye zvino unomanikidzwa kufamba-famba nejunk adapter yakaiswa mufoni yako nekuti Apple inoda kubvisa chiteshi cheyese. Foni haigone kubhadhariswa kana odhiyo ikanzwika. Kune avo vanoshandisa mamaikorofoni e Square kana masevhisi kubhadharisa vatengi, vanofanirwawo kushandisa iyi adapta, zvichiita kuti zvese zviome zvakanyanya.
Lolo kufora akadaro
Kwandiri, Apple iri kumisa kutsva, kupa chete mutsauko. Handina kumboona chero chinhu chakavandudza uye icho zvimwe zvishandiso zvisina.
Kubva gore mushure mekufa kwaBill Gates, zvese zvavakaita kuteedzera vamwe, asi vatengese sechigadzirwa chemhando yepamusoro. Hapana chinhu chitsva uye icho hapana munhu chataive nacho sezvataive nega yega vhezheni ye iphone munguva yakapfuura.
Pindura Lolo Marchal
Bill Gates achipfuura? Ndeupi waunosvuta?
Nenzira ... Jira ripi rine boogeyman musikana, iyo sia iyo ... Oo mwari wangu, chinhu chinotyisa sei, anotaridzika semunhu mukuru wemuTim Burton bhaisikopo ...
StatusbarVolume inotibvumidza kudzora vhoriyamu ye iPhone yedu kubva pachiratidziri
Iwo ekutanga mabhenji eiyo iPhone 7 ine A10 processor inosvinwa